အဘယ်သို့ငါ IPHONE မှဖုန်းမြည်သံကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး - IOS အတွက် - 2019
အသုံးပြုသူများမကြာခဏကသူ့မိုဘိုင်းကိုခေါ်မှအမျိုးမျိုးသောသီချင်းတွေကိုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်တေးသံများ install လုပ်ပါ။ iPhone အတွက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖုန်းမြည်သံကိုအလွယ်တကူကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့တချို့အစီအစဉ်များမှတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်အခြားပြောင်း။
သာထိုကဲ့သို့သော iTunes နဲ့ iTools အဖြစ်, ကွန်ပျူတာနှင့် software နှင့်အတူခွင့်ပြုခဲ့ရရှိနိုင်စာရင်းကနေသီချင်းဆိုဖျက်ပစ်ပါ။ စံဖုန်းမြည်သံ၏အမှု၌, သူတို့ကသာအခြားသူတွေဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်ဖုန်းမြည်သံကို install လုပ်နည်း
Option ကို 1: iTunes ကို
ဒီစံအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းက iPhone ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွေစီမံခန့်ခွဲဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ iTunes ကိုအခမဲ့နှင့်ရုရှားဘာသာစကားရှိပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖယ်ရှားရန်အသုံးပြုသူသာ PC ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက် Lightning / USB cable ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: iTunes ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ iPhone ကသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ပွင့်လင်း iTunes ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
ယင်းချိတ်ဆက် iPhone ရဲ့ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အပိုင်း "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" စာစောင်ကို "န့်သတ်ချက်များ"။ tick ရန်လိုအပ်သောကြောင့် "ကိုယ်တိုင်ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်"။ ကလစ်နှိပ်ပါ "ထပ်တူကျအောင်" settings ကိုကယ်ဖို့။
အခုအပိုင်းကိုသွား "အသံ"ဒီ iPhone ပေါ်မှာ install လုပ်ထားသမျှသောလက်စွပ်တန်ချိန်ပြသပါလိမ့်မည်အဘယ်မှာရှိ။ ညာဘက်သင်ဖျက်ချင်သောဖုန်းမြည်သံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ မီနူးမှာတော့စာနယ်ဇင်း " '' စာကြည့်တိုက်ကနေဖျက်ပစ်ပါ။ ထိုအခါကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးအတည်ပြု "ထပ်တူကျအောင်".
သင် iTunes ကိုမှတဆင့်ဖုန်းမြည်သံကိုမဖယ်ရှားနိုင်လျှင်, ထို့နောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိ, သင် Third-party application ကိုမှတဆင့်သေံထားကြ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, iTools သို့မဟုတ် iFunBox ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်ဒီပရိုဂရမ်ဖျက်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: iTunes ကိုရန်သင့်ကွန်ပျူတာကနေဂီတကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Option ကို 2: iTools
iTools - ထို iTunes ကိုအစီအစဉ်၏ analogue တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပါဝင်သည်။ iPhone ကိုမှဖုန်းမြည်သံ download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့စွမ်းရည်အပါအဝငျ။ ဒါဟာအစအလိုအလျောက်ကိရိယာမှပံ့ပိုးသောအသံဖမ်း format နဲ့, ပြောင်းပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ smartphone ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ပါ, download, နှင့် iTools ကိုဖွင့်။
ကိုသွားပါ "ဂီတ" - "ဖုန်းမြည်သံ" လက်ဝဲ Menu ထဲမှာ။
ထို့နောက်ဖယ်ရှားပစ်ရချင်သောဖုန်းမြည်သံ, စာနယ်ဇင်းကို tick "ကိုဖျက်".
ဖျက်မှုကိုကလစ် နှိပ်. ကိုအတည်ပြု "အိုကေ".
ထိုပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ: iTools iPhone ကိုမမြင်ရပါဘူး
အသံက iPhone ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးလျှင်အဘယ်အရာကို
မူလကအဆိုပါ iPhone ပေါ်မှာ install လုပ်ထားခဲ့ Melody, iTunes ကိုသို့မဟုတ် iTools ကနေတစ်ဆင့်ပုံမှန်လမ်းအတွက်ဖယ်ရှားမရပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဖုန်းတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း, Jailbreak ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒီနည်းလမ်းကိုနှုနျးဖို့မအကြံပြု - က PC ပေါ်မှာဆော့ဖျဝဲကိုသုံးပြီးဖုန်းမြည်သံကိုပြောင်းလဲရန်, ဒါမှမဟုတ်စတိုးဆိုင်က App Store တွင်ဂီတကိုဝယ်ခြင်းငှါပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာအသံတိတ် mode ကိုသက်ဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအသုံးပြုသူချေါသောအခါထိုအခါမှသာတုန်ခါမှုနားထောင်မည်။ ဤသည်ကိုပြသသည့်အနေအထားအတွက်အထူး switch ကို setting များကကုန်ပြီ။
အသံတိတ် mode ကိုလည်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တောင်းဆိုတဲ့အခါတုန်ခါမှုတို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Settings" ကို IPhone ကို။
အပိုဒ်မှာတော့ "တုန်ခါမှု" သင်တို့အဘို့သင့်လျော်သော setting များကိုရွေးချယ်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်တောင်းဆိုအခါ flash ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ခုသာကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့်ခွင့်ပြုခဲ့ iPhone မှဖုန်းမြည်သံများနှင့်အချို့သော software ကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ပုံမှန်အတိုင်းလက်စွပ်တန်ချိန်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကို pre-installed မှစ. , သင်, သင်သာအခြားသူတွေအဘို့ထိုသူတို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဗီဒီယို Watch: AirPods2& iPhone 11 - Everything We Know! + Exclusive Leak (စက်တင်ဘာလ 2019).